Ụlọ a na - eji ụlọ ọrụ ndị na - akpọsa bọl ígwè na - China Boegger
Unu nọ ebe a:Ụlọ > Products > Architectural Mesh > Ụdị:>Ụzọ n’Ụzọ
Ọtụtụ puku bọl ígwè dị n’ahụ́ n’ahụ́ n’ahụ́ n’ahụ́ n’oge ochie, bụ́ ndị a na - akwụsị n’ahụ́ n’oge ochie mmetụta dị ukwuu ma dị mma. A pụrụ ikewa ya n’ụdị atọ dị iche iche: gburugburu, a na - akpọ bọl. Ha nile nwere ọtụtụ ụhara na ụcha dị iche iche maka ịhọrọ. Ọ bụghị nanị n’ebe a na - ekebi nri, nke a na - akpọkwa ákwà ígwè bọl. ma ikwekwa ka ikuku na ìhè gbasara. N’ịbụkwa ọdịdị na - akpali mmasị ma na - enye ọkụ, a ga - ekwesị ekwesị maka nnukwu ihe dị iche iche. Ụlọ Nzukọ nduzi, discotheques, klọb n’abalị, ụlọ ahịa ndị na - ere ahịa, n’ebe a na - ere ya, nnukwu na ọtụtụ ebe ndị ọzọ dị mma bụ́ ndị dị mkpa iji ákwà ígwè mee ihe.
Ụfọdụ n’ihe ndị a na - akpọ n’akwụkwọ.
L Bead diameter: 2/2.4/3.2 / 4.4/4.5/5.0/6/8/10/12 mm.
Ụlọ Nzukọ Alaeze: electroplate, a na - apụta chrome, a na - eji chrome, a na - akpọkwa ya.
Ọdịdị Bead: gburugburu, ọdịdị pumpkin, oval, nke rugba, nt.
L ihe dị ka mkpụmkpụ 66 kwa mita.
A pụrụ ịchọpụta n’ọdịdị na ọ̀tụ̀tụ̀.
Mmadụ n’ahụ́, na - adịgide ike.
Ịdị ọnọdụ na ime mgbanwe.
Mụ na ọdịdị na - akpali mmasị na - ada ada.
M dị mfe ịkwụnye ma na - enye.
Ọ dịghị mkpofu ma ọ bụkwanụ ákwà.
Ọ dịghị mkpo.
N’ihi arụ ọrụ ya pụrụ iche, a na - egbu ígwè yiri ka ọ dị ọcha, dị ọcha ma mara mma. Ọ pụrụ ịbụ onye na - ekewa n’ebe dị ebube, maka ime ka ọnụ ọgụgụ dị n’ụzọ dị ukwuu. Site n’iji ụcha na ọdịdị dị iche iche dị iche iche, a pụrụ iji bọl ígwè mee ihe dị ka ọgwụgwọ windo, ndị na - ekewa, mgbidi, Ụlọ a na - achọ ígwè, nakwa ndị ọzọ. A pụrụ itinye ya na:
Ụlọ Nzukọ Ihe Ngosi.
Ụzọ dị elu.
Ịgba nnukwu: n’oge ọ bụla a na - akpọ ígwè, e mesịa n’akpa PE ma tinye akpa n’ime katọn.
L Spool a na - akwụsị: a na - akwụ ígwè a na - akpọ n’akwụkwọ ígwè a na - akpọ n’akpa PE dị n’ime, bụ́ igbe katọn n’èzí.
Ochie:Ụzọ a na - akpọsa
Mwagụ̀ metal bead curtain, ball chain curtain,
Mmadụ dị iche iche na nke dị ịrịba ama, ShimmerScreen bụ a na-egwú bụ́ BCM Architectural. Ụmụ ahịa na ndị nwe ụlọ n’otu n’ụwa nile na - eji ígwè anyị a pụrụ ịrụ ụkwụA na - akpọlS ka nweta ìhè ma kọwaa...
NDỊ NA - AKỤRỤ METAL
METAL BEDSNdesịta Ihe Ndị Na-akụkụ Arụkwọ:Ihe a na - eme: Akwụkwọ akpụkpọsa sus304, 316 na 316L, aluminium na ígwè ndị ọzọ.Àgwà ndị a pụrụ ịchọpụta: Ọlaọcha, ọchịchị, ọchịchị, ọchịchị uhie, ọlaedo, oj...